August 9, 2020 NEWS 3
NAIROBI(P-TIMES)- Dhaqaale burbur xoog leh ayaa soo wajahay dalka Kenya, ka dib markii ay Soomaaliya mudo ku siman bil iyo dheerad hakisay duulimaadyadii Qaadka ee tagi jiray dalkeeda, sababo la xariira cudurka Covid19 iyo xariirka labada dhinac oo aan wanaagsaneyn.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa xalay diiday in ay sabtidii shalay bilowdaan duulimaadyada Qaadka ee ka imaanaya xagga Kenya, markii ay Nairobi ku dhawaaqday in ay hakiyeen duulimaadyada diyaaradaheedu ku tagi jireen Soomaaliya.
Beeraleyda Qaadka ee dalka Kenya ayaa ku hanjabay in ay ku biirayaan kooxda Argagixisada ah ee Al- Shabaab, si ay ula dagaalamaan dawladda Faderaalka, haddii aysan fasixin Duulimaadyada Qaadka ee ay joojisay Xukuumadda Faderaalka.
Warbaahinta Vice News ayaa tabisay warbixintan oo ka hadlaysay saameynta Kenya ay ku yeelatay Hakinta Soomaaliya ay xanibtay in Qaadku uu tago dalkeeda, taas oo dhabarjab weyn ku keentay dhaqaalaha gudaha Kenya.
Kenya waxay doonaysaa in ay dhaqaale badan ka hesho Soomaaliya oo ay u dhoofiso duulimaadyada Cagaaran, laakiin waxaa garab socda ole-ole ay wadaan qaar kamid ah dadka Soomaaliyeed oo si adag u diidan in Qaadka la keeno gudaha dalkooda.
Sidaan mar horeba u sheegay qaatku wax saamayn ah oo weyn kuma laha dhaqaalaha guud ee Kenya. Sannadkii 2018/19 miisaaniyadda Kenya waxay ahayd 29 billion oo dollar, halka tan Itoobiya ahayd 13 billion. Soomaaliyana maba gaarto xitaa 500 MILLION dollar. Xitaa haddii misaaniyadda Soomaaliya oo dhan la siiyo Kenya, waa koob fuusto biyo ah la daray.
Qaatka Kenya wuxuu ka baxaa degmada Mero waana halka magaca Miirow kasoo jeedo. Dadkeedu sida Soomaalida ayey qaatka cunaan, waana saaqidiin ku habsaamay cuniddiisa sida Soomaalida qaarkeed. Xildhibaannada Mero ayaa dowladdooda ku cadaadinaya inay arrinka qaatka kala hadlaan Soomaaliya.
Haddii reer Mero ku biiraan Al-Shabaab, waa arrin wanaagsan sababtoo ah Towxiidka Islaamnimada ayaa loo laqimayaa, halkaasna waxaa ku baabi’ doonaa qaatka Miirowga oo iyaga iyo Soomaaliba ka raysan doonaan.
Muuqaalkani waa 2014kii, kaddib markii Ingiriiska laga joojiyay qaadka.
Qaadka dhibaatada 1aad ee haaysata ummadda Soomaaliyeed, halka tan ku xigtana aay tahay Xabbaddu.
Marka, Soomaaliya kolleeyba dhibaatadaa lagama jooyin karo oo Kenya waxaan la leenahay, 800km xudduud ah.
Laakiin si dhamaatadaa loo yareeyo la soo hor mariyo tan uu Qaadku u leeyahay dhaqaalaha Dalka Soomaaliyeed.
Kenya Qaadku waxaay ku beddelataa oo aay aqbaleeysaa waa, lacagta adag ee Dollarka ah.
Si marka looga hor tago lacagtaa adag ee aay Kenya ku badalaneeyna Daroogo ku dhaceeysa 24 saac, oo in kenya lagu qasbo in aay qaadato Kenya Shilling inta laga sameeynayo mid aay Soomaali leedahay.
Iyo in Qaadka laftiisu laga beero, Soomaaliya.
Haddii aanan ficilladan iyo kuwa lamid ah la qaadin, dadka Soomaaliyeed waxaay ahaanayaan, Daroogeyste yaal aay lacagta adag ka gurtaan, Kenya & Itoobiya!!!